Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika oo u Oohiyay Is-dhexgalka Afrika Hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika oo u Oohiyay Is-dhexgalka Afrika Hadda
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Guddiga Dalxiiska Afrika oo munaasabad muhiim ah ka dhacay
Khudbadihii furitaanka ee Bandhigga Ganacsiga Intra-African 2021 ee lagu qabtay Noofambar 15-21, 2021, magaalada Durban ee Koonfur Afrika, waxaa jirtay qaylo dhaan ku aaddan is-dhexgalka si loo suurtageliyo waaxda dhaqaalaha dalxiiska inay u shaqeyso si ka wanaagsan. Tan waxaa si buuxda u taageeray Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) Guddoomiyaha Cuthbert Ncube.
Baaqa la soo jeediyay ayaa ahaa in cid kasta oo ay khusayso la isugu yimaado sidii block midaysan.
Waxaa la sheegay in hadda la joogo waqtigii la bilaabi lahaa in la qiimeeyo isbeddellada iyo saameynta dib-u-dhacyada hadda jira ee masiibada iyo horumarinta qaababka soo kabashada wadajirka ah.
Moodooyinka ayaa markaa loo tarjumi karaa inay abuuraan waxa noqon doona tiirarka yaraynta saameynta dhaqaale ee COVID-19.
The Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB), oo la aasaasay 2018, waa urur si caalami ah loogu ammaanay inay u dhaqmaan sidii kicinta mas'uulka ka ah horumarinta socdaalka iyo dalxiiska ee, ka imaanaya, iyo gudaha gobolka Afrika. Waxay muddo dheer taageere u ahayd in Afrika loo soo bandhigo hal goob dalxiis oo midaysan.
Saamaynta masiibada ayaa socon doonta ilaa 2023 waxayna u badan tahay ilaa 2025, laakiin warka wanaagsan ayaa ah inta badan meelaha qaaradaha la aado ayaa helaya habab ay ula qabsadaan oo ay dejiyaan qorshooyin soo kabasho oo lagu maareeyo dib u furista warshadaha Dalxiiska.
Waa in la helo tallooyin adag oo ay dawladuhu ku heshiiyaan qaabka ay tani u dhici karto si dib loogu soo nooleeyo Warshadaha Safarka iyo Dalxiiska oo hadda cadaadis weyn saaran yahay. Waxaa jirta baahi degdeg ah oo ah in aan u wada shaqeyno siyaabo kala duwan, in la sameeyo dadaallo wax looga qabanayo ganacsiga iyo caqabadaha safarka sida la yiri, "Afrika waxay u furan tahay ganacsi." Sida hadda la joogo, weli waa qarow in laga safro waddan xubin ka ah waddan kale.
Arrimaha aasaasiga ah ayaa u baahan in wax laga qabto ka hor inta aysan Afrika ku naaloon dadaallada ganacsi ee Afrika dhexdeeda ah. Waaxda Dalxiiska ayaa laga yaabaa inay tahay qaybta ugu awooda badan inay ku koraan qaarad ahaan waxaana si joogto ah loo kordhin karaa si wax looga qabto baahidan. Iskudubarid wax ku ool ah iyo ka tashiga guud ee meelaha gobolka, Afrika waxay si dhab ah isugu soo bandhigi kartaa goobta Socdaalka iyo Dalxiiska oo mid ah.
Afrika waxa ay ku qasbanaatay in ay u hurto faa’iidooyin dhaqan-dhaqaale iyo fursado korriin oo baaxad leh oo Dalxiisku awood u yeelan karo in uu magdhabo oo uu keeno guud ahaan qaaradda. Maskaxda cidhiidhiga ah iyo in la sugo qayb ka mid ah dal-kooxeedka Afrikaanka ah ee waddanku waa hab-aragti gaaban oo seegay sawirka weyn. Waxaa jira dhowr fursadood oo laga faa'iidaysan karo iyadoo la qaato istaraatiijiyad si wanaagsan loo agaasimay iyadoo la qabsiga heshiisyada laba geesoodka ah lagu dhiirigelinayo in la hubiyo in dalalku ay ka wada shaqeeyaan dhacdooyinka ganacsiga iyo guud ahaan waaxda Dalxiiska iyadoo kobac iyo ballaarin ay yihiin yoolalka.
Nkosazana Zuma, Guddoomiyihii hore ee Midowga Afrika (AU) iyo Wasiirkii hore ee Chad
Guddoomiyihii hore ee Midowga Afrika ayaa ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in qaaradda Afrika ay bilowdo qaddarinta hindisayaasha ay soo jeediyeen oo ay fuliyeen Midowga Afrika. Gaar ahaan, Dawladaha xubnaha ka ah waxay u baahan yihiin inay bilaabaan daabacaadda Baasaboorka AU-da ee loo wakiishay in waddan kasta laga dhoofiyo. Rabitaanka la'aanta waddammada inay ka qaybgalaan ayaa meesha ka saaraysa horumarka iyo hirgelinta baasaboorkan oo furi kara albaabka dalxiiska.
Bandhiga Carwada Ganacsiga Afrika ayaa waxaa ka soo qeyb galay Wasiiro iyo Madaxii hore ee Midowga Afrika Nkosazana Zuma oo ay ku wehelinayeen Madaxda Maamulka Dalxiiska ee Afrika iyo marti sharaf kale.
Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) waa qayb ka mid ah Isbahaysiga Caalamiga ah ee Wada-hawlgalayaasha Dalxiiska (ICTP). Ururku waxa uu siiya xubnahooda u doodis toosan, cilmi baadhis hufan, iyo dhacdooyin cusub. Iyadoo lala kaashanayo xubnaha gaarka ah iyo kuwa dawliga ah, Guddiga Dalxiiska Afrika waxay kor u qaadaan koboca joogtada ah, qiimaha, iyo tayada socdaalka iyo dalxiiska ee Afrika. Ururku wuxuu bixiyaa hoggaan waxayna kala taliyaan si shaqsi iyo si wadajir ah ururada xubnaha ka ah. ATB waxay ku fidinaysaa fursadaha suuqgeyn, xidhiidhka dadweynaha, maalgashiga, summaynta, horumarinta, iyo samaynta suuqyo caan ah. Wixii macluumaad dheeraad ah, riix halkan.